Soo dejisan Modio 5.301 – Vessoft
Soo dejisan Modio
Modio – software ah in ay la shaqeeyaan kulan, in la horumariyo, waayo Console Madaxweyne Siilaanyo Oo kulan 360. Modio ku jira hawlaha ay u edit faylasha iyo awood u helaan in si database oo ka mid ah kulan ku badbaadi oo dunida ku baahsan ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan faylasha bixi ama bedelay on kaydinta ah si loo hubiyo Console ciyaarta. Modio kale oo ku jira module ah si aad u eegto wararka ciyaaraha ka. Software waxay leedahay interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Itusi faylasha kulanka Console Madaxweyne Siilaanyo Oo 360
Helitaanka database ee kulan ku badbaadi oo dunida ku baahsan
Burns gudbiyo kaydinta
Modio Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Battle.net 1.11.4.2368
English, Українська, 中文, Русский... Mozilla Thunderbird 45.3 iyo 49 beta 1
العربية, English, Українська, Français... AVG 2015 build 5577 Free, AntiVirus iyo Internet